S'il Vous Plaît et Merci | Martech Zone
Friday, May 21, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Hadaadan wali dareemin, waan kudhaafay gudaha Paris la shaqeynta shirkad Waxay ahayd safar duufaan dhab ahna waxaan dib ugu laabanay maanta (waa 6:30 AM halkan). Aniga oo safarka ku horreeya, waxaan jeclaan lahaa in aan ku cadaysto Faransiiskayga sidaa darteed uma aanan muuqan sida jaahil Mareykan ah. Nasiib wanaag, ku dhowaad qof kasta oo aan halkan ku galnay wuxuu si fiican ugu hadlaa Ingiriisiga.
Waxaan la hadalnay saaxiibkey shalay, wuxuuna noo sheegay in runti ay jireen labo erey oo kaliya oo aad u baahan tahay inaad ku ogaato Paris si aadan u caayin dadka deegaanka adigoo u maleynaya inay hadlaan. afkaaga… Taasi waa mahadsanid (mahadsanid) iyo fadlan (s'il vous plaît). Waxay igu dhalisay inaan ka fekero sida aan isugula dhaqmayno sidii ganacsiyo. Sababtoo ah lacag bixinta ayaa sida caadiga ah isbedeleysa gacmaha, waxaan badanaa ilaawnaa inaan dhahno fadlan ama mahadsanid.
Qof baa mar ii sheegay inaysan marna ahayn ujeedka shaqaale ama iibiye inuu sameeyo 'xun shaqo '. In kasta oo ay jiraan ganacsiyo badan oo si khaldan wax u gudbiya, si hoose u keena, ama ku dhaca arrimaha waqtiga time waligood weligood loogu tala galay inay sidaa u dhacdo. Waxaan ushaqeynayaa xoogaa inbadan oo adag mahadcelinta iyo si xushmad leh waxaan usheegayaa natiijooyinka… Waxaan rabaa inaan la shaqeeyo dadka fahamsan in ganacsigu ganacsi yahay laakiin kobcinta xiriir adag iyo edeb lahaanshuhu waa inuu had iyo jeer noqdaa mudnaanta.
Waad ku mahadsantahay masuuliyadaada bogga. My Analytics Marna been ma ogaan waxaanan ogaanay inaan sifiican usamaynay labadii usbuuc ee udambeeyay koritaanka. Tani badanaa waxay ku xiran tahay isku dheelitirnaanta jagooyinka. Hadda safarkaygu waa dhammaystiray oo tifaftirkii ugu dambeeyay ayaan ku sameeyay Blogging Corporate for Dummies ku jiraan, waxaan rajeynayaa inaan sameeyo baaritaan qoto dheer oo aan ku kordhiyo tayada qoraalada maqaalka. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo aad jeceshahay inaan wax ka qabanno, fadlan ka faa'iideyso foomkeenna ChaCha.me ee bogga bogga si aad noogu soo dirto su'aal.
Douglas Karr Friday, May 21, 2010 Sunday, October 4, 2015
Maareynta Wajahadda Barnaamijka Barnaamijkaga